बुद्ध दर्शनले फेरीएको जीवन - NayaNepal News
Home अन्तरबार्ता बुद्ध दर्शनले फेरीएको जीवन
बुद्ध दर्शनले फेरीएको जीवन
काठमाडौँ । भन्निछ मानिसको जीवन संघर्षमय हुन्छ । जीवनमा अनेक उताव चढाव आइरहन्छन् तर खास समयमा एउटा मान्छेको जीवनमा आमुल परिवर्तन पनि भैदिन्छ । मानिसको सोचमा हुने परिवर्तनलाई व्यवहारमा परिणत गर्दा जीवन यात्रा नै बदलिन्छ । यस्तै एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् सांङयो योञ्जन । साविक दोलखा भेड्खु–८ हाल मेलुङ–४का योञ्जनको संघर्षमय जीवन र सफलताका शुत्र जो कोहीलाई पनि प्रेरणाको श्रोत हुन सक्दछ । उनै योञ्जन संग नयाँ नेपाल न्यूजले लिएको अन्तर्वातामा आधारित सम्पादीत जीवन यात्रा ।
वाल्यकाल र भविष्यको चिन्ता
हिमाली जिल्ला दोलखाको दुर्गम बस्ती भेड्खुमा २०३१ साल भदौं ५ गते पीता दावा लामा र माता लाल कुमारी लामाको कोखबाट काइला सुपुत्रको रुपमा उनको जन्म भयो । उतिबेलाको समय लेकको बस्ती आफ्नै बारीमा भएको उत्पादनले तीन महिना पनि खान मुस्किल हुने । त्यस माथी चामल त देख्नै मुस्किल थियो । बारीमा उत्पादन हुने मकै, आलु, कोदोले नै उनको परिवारको जिवीका चल्दै आएको थियो । ७ जनाको परिवारलाई दैनिक गुजरा गर्न कठिन हुदाँ उनलाई लाग्थ्यो सुखको दिन कहिले आउला ?
उनका दाजुहरु तीन जना उमेर पुगेपछि तेतिबेलाको शाही नेपाली सेना (हालः नेपाली सेना)मा भर्ति हुन शहर पसे । त्यसपछि उनका पीता र मातालाई निकै सकशपुर्ण अवस्था आईलाग्यो । घरका हुर्के बढेका पाखुरीमा बल भरिएका छोराहरु शहर पस्ने अनी साना दुई भाई छोरा आफुसंग । बारी बाझैं हुनेभो भन्ने चिन्ताले माता पीतालाई सताएको देखेपछि उनले गाउँमै बस्ने निधो गरे । घरको अभाव र दुःख, विरामी आमाका कारणले पढाई साचे जस्तो भएन् । त्यसमाथी गाउँघरमा हुने झै झगड्मा उनका पीता अग्रसर हुने गर्दथे । उनको बाल मतिष्कमा त्यो कुराले निकै नराम्रो लाग्थ्यो । तर उनी चाहेर पनि त्यो कुरा रोक्न सक्दैनथे ।
स्थानीय जुके प्रा.वि. बाट प्राराम्भिक शिक्षा हासिल गरे पछि छिमेकी मेलुङ गा.वि.समा रहेको त्रिभुवन मा.वि. ( जुन विद्यालय २००७ सालमा स्थापना भएको पुरानो विद्यालय हो )मा निमावी तहको अध्यन पुरा गरे । घरको कम्जोर आर्थिक अवस्था र दीर्घ रोगी आमाका कारण पढाई अगाडी बढ्न सकेन । काठमाडौँमा प्रवेश पछि २०५६ सालमा प्राइभेट एस.एल.सी को उत्तिण नै उनको औपचरीक शिक्षा कायम रहयो । तर उनी सँग कुनै पनि विषयमा पिएचडी गरेको व्यक्तिमा भन्दा बढी ज्ञान सम्बन्धित विषयमा रहेको देखिन्छ । व्यवहारिक ज्ञानले नै मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउछ भन्ने नमुना साङयो योञ्जन हुन् ।
आर्मी बन्ने रहर
२०५१ साल तिर उनमा शहर पस्ने रहर जाग्यो । शहर त जाने तर के निहुँ पारेर घरबाट निस्कने उनी सोच्दै थिए । दाजुहरु सेनामा आफुलाई पनि सेना हुने रहर । त्यसपछि एकदिन साझँमा उनले अगेनो छेउ बसेर बा लाई भने ‘आर्मीमा भर्ना खुलेको छ रे मपनि शहर जान्छु’, । उनले तेति भनि सक्दा नसक्दै आमा र बा कराउन थाले ‘खेतिपाती छोडेर त्यहा किन जानु’ । तर उनले जसरी पनि जाने भनेपछि बा खल्तीबाट ५ सय रुपैयाँ झिकेर फ्याकिदिए । गाउँमै रहदा न्यूनस्तरको जीवन बिताउनु पर्दा उनलाई हिन्तावोधका साथै यहाँ वाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चिन्ता लागिरहन्थो। दाजुहरु आर्मी मै रहेकाले उनलाई पनि शुरुमा त्यतै तर्फ आर्कषित गर्यो ।
भेड्खुबाट तामाकोशी किनार हुदै उनी गाडीबाट काठमाडौं आए । जेठो दाई सेनाको क्वाटर स्वयम्भूमा बस्ने भएकाले उनी उतै गए । टुडिखेलको चौरमा सेनामा जागिर खाने केटाहरुको हुल थियो । कोही कुद्दै थिए । उनी पनि सामेल भए । दौडमा पास भए । तर अर्को दिन, उनमा फेरि घरको सम्झनाले पिरल्यो । गाउँमा नै फकिए । उनलाई जिन्दगीमा केही गर्नु पर्छ भन्ने सधै लाग्थ्यो । तर कता कता के मिलिरहेको थिएन् ।
जागिर जीवन र सिकाई
जागिरको शुरुवात मासिक ५ सय रुपैयामा इन्द्रेणी रेष्टुरेन्टमा किचेनको कामवाट भयो । जहा विहान ६ वजे देखि वेलुका १० वजे सम्म खट्नु पर्ने । ४ महिना पछि हेल्परमा प्रमोसन भए । ६ महिना सम्म त्यहाँ काम गरे पछि ८ सय रुपैयामा ज्याठामा काम गरे त्यहाँ काम गर्दा गर्दै १४ सयको अफर आयो र वतिसपुतलीमा पुगे । त्यस पछि गैडाकोट र बागबजारमा मासिक ३ हजारमा काम गरे । वागवजारमा खत्री फास्टफुडमा काम गर्दा सम्म उनि त्यति वेलाको चलनचल्तीको राम्रै सेफ कुकमा परिचित थिए । राम्रा सवै खालका रेष्टुरेन्टमा गएर खानाको स्वाद चाख्ने, मसलाहरुको अध्ययन अनुसन्धान र खानालाई कसरी स्वादिष्ट वनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनले फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरे । खोज अनुसन्धान र सिकाइ लाई निरन्तरता दिए ।
तानवपुर्ण काठमाडौँको वसाई र आमाको देहवसान
स्थायी काम नहुने, समय–समयमा वेरोजगार भै रहने, त्यही वेला रोगी आमाको उचार गर्नु पर्ने त अर्को तर्फ साना छोरा–छोरीको स्कुल फी तिर्न पर्ने निकै तनाव हुने । उनि भन्छन् “कुनै दिन बाटोमा १० रुपैया भेट्दा पनि निकै राहत मिल्ने समय थियो त्यो ।” त्यही वेला दीर्घरागी आमाको पनि देहवसान भयो ।
वौद्ध धर्मले परिवर्तन
कामको सिलसिलमा स्वयम्भू क्षेत्रमा वस्दा, स्वयम्भु घुम्ने, प्रार्थना गर्ने, राम्रो काम र उचित पारिश्रमको काममा गर्ने गर्दथे यसरी दैनिक ध्यान र भक्तिले सकारात्मक परिवर्तन हुन थाल्यो । एक पछि अर्को फड्को मार्न थाले । गरेको काम सफल हुदै एक सफल व्यवसायी वने ।
तिब्वत तथा चाइनाको वसाँई र व्यवसायीक सोचको विकास
छ सात वर्षको काठमाडौँ बसाई पछि उनि खासा तर्फ लागे, त्यहाँ एक होटलको म्यानेजर भएर काम गरे । त्यस पछि लासा हुदै चाईनाको सिचुवा सम्म पुगे । त्यहाँ वस्दा उनले चाइनीज खानाका परिकारहरुलाई नेपालमा व्यवसायीक रुपमा दिने अठोत सहित नेपाल फर्किए ।
एस.चाइनिज किचेनको स्थापना
२०६१ मा नेपाल फर्किए पछि अहिले सम्मको सिप र अनुभवलाई आफनै व्यवसायमा परिणत गर्ने निधो गरे । सिन्कामा उनेर खाने खाना स्टिक फुड जसलाई चाईनामा स्टेट फुड (बाटोमा हिड्दै खाने खानाको रुपमा चिनिदो रहेछ ) त्यसको व्यवतसाय हुरु गरे । स्टिक फुडलाई नेपालमा व्यवसायक रुपमा शुरु गर्ने पहिलो गर्ने पहिलो व्यक्ति नै साङयो योञ्जन हुन् । यसबाट उनि मात्र सन्तुष्टी छैनन् उनि संग संगत गर्ने सवैको प्रगति भएको छ । हाल न्यरोड खिच्चा पोखरीमा रहेको एस.चाइनजि किचेनलाई व्राण्डिङ गरेर भविष्यमा देशव्यापी शाखा विस्तार गर्ने उनको योजना छ ।
Previous articleआमा द्धारा गुल्मीमा २ महीनाकी नवजात शिशुको हत्या
Next articleस्थानीयको अवरोध पछि रोकियो धरहरा निर्माणको काम
दु:खद खबर: कोरोना भाइरसका कारण एक नेपालीको मृत्यु
अब राहत वितरणको फोटो खिच्न नपाइने
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाः दुध किसानलाई राहत, ३० सिटको क्वारेन्टाइन तयार
सडकपेटीमा भोकभोकै बस्‍ने, नदेखेझैँ गर्छन् प्रहरी
उच्च हिमाली क्षेत्रको पानी विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ
संगीतमा लागेर आलिसन घरमा बस्न नसकेपनि इज्जतले बाच्न सकिन्छः सुजन